Etu esi eme ọba akwụkwọ na Minecraft | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | 25/09/2021 14:00 | Egwuregwu
Minecraft bụ egwuregwu nwere nnukwu ndị na -eso ụzọ gburugburu ụwa. Otu n'ime igodo egwuregwu a bụ na anyị na -achọpụta ihe ọhụrụ mgbe niile maka nnukwu mbara igwe ya, yana ọtụtụ echiche na ihe dị iche iche. Maka nke a, a na -achọpụta aghụghọ ọhụrụ ka ha nwee ike ịga n'ihu na ya. Ihe ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ bụ ịma ụzọ ha ga -esi rụọ ọba akwụkwọ na Minecraft.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ike ịme ọbá akwụkwọ na Minecraft, anyị ga -egosi gị usoro anyị ga -eso na -esote, ka usoro a wee dịrị gị mfe karịa mgbe niile. Nka bụ ihe dị oke mkpa na egwuregwu a, yabụ ọ dị mkpa ịmata ụzọ anyị ga -esi nwee ike rụọ ụfọdụ ihe ma ọ bụ ngwa na akaụntụ anyị.
Anyị na -agwa gị ihe ọbá akwụkwọ dị na Minecraft, ụzọ ọ ga -esi kwe omume imepụta ya n'onwe anyị, yana ihe ndị achọrọ na nhazi a n'ime egwuregwu na ụzọ anyị nwekwara ike isi nweta ihe ndị a. Site na ozi a, ọ ga -ekwe gị omume ịmepụta ọba akwụkwọ nke gị na egwuregwu ngọngọ a ma ama na ngwaọrụ gị.
1 Kedu ihe ọba akwụkwọ dị na Minecraft na gịnị ka ha bụ
2 Otu esi eme ọbá akwụkwọ na Minecraft
2.1 Gaa ụlọ akwụkwọ
3 Nweta ọba akwụkwọ
Kedu ihe ọba akwụkwọ dị na Minecraft na gịnị ka ha bụ
Lọ ahịa akwụkwọ (nke a makwaara dị ka ebe a na -edebe akwụkwọ ma ọ bụ ọba akwụkwọ, okwu ị ga -ahụ ọtụtụ) bụ ngọngọ na Minecraft nke a na -eji emezi tebụl mgbaasị. Na mgbakwunye na nke a, enwere ike iji ya dị ka ihe ịchọ mma ma ọ bụ dị ka mmanụ ọkụ n'ime egwuregwu. Mgbe agbajikwa akpa akwụkwọ n'egwuregwu ahụ, ị ​​ga -enweta akwụkwọ atọ n'ọnọdụ mgbanwe, n'agbanyeghị na osisi sitere na ya furu efu na anyị enweghị ike iweghachite ya ọzọ.
Ọbá akwụkwọ dị na Minecraft na -enyere anyị aka nweta ọkwa dị elu nke anwansi mgbe anyị na -eji tebụl enchantment na akaụntụ anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iru ogo enchantment kacha (ọ bụ ọkwa 30), anyị ga -eme mkpokọta ọba akwụkwọ iri na ise. Nke a chọrọ mkpokọta akwụkwọ 15 na nkeji osisi 45, ma ọ bụ jiri okpete / akwụkwọ 90, akpụkpọ anụ 135 na ndekọ 45.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ahịa akwụkwọ na egwuregwu enwekwara ike iji ya dị ka mmanụ ọkụ n'ime ọkụ. Agbanyeghị na ọ bụ mmanụ ọkụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na oge ịgba ọkụ bụ otu ihe ahụ, mana nkwadebe ya chọrọ nnukwu ihe eji eme ya, yabụ na ọ naghị akwụ anyị ụgwọ n'ezie. Ọ bụ ihe anyị nwere ike iji dị ka mmanụ ọkụ n'ọnọdụ ebe anyị enweghị ihe ọzọ, mana ọ kwesịghị ịbụ ihe a na -emebu.
Otu esi eme ọbá akwụkwọ na Minecraft
Ntụziaka ọbá akwụkwọ dị na Minecraft nwere isi ihe abụọ mejupụtara: osisi na akwukwo. Osisi ahụ nwere ike ịbụ ụdị plank ọ bụla anyị hụrụ. Ọ dakọtara na osisi oak, fir, birch, oké ọhịa, acacia, osisi oak gbara ọchịchịrị, ogho uhie ma ọ bụ ọbụna osisi agbagọ agbagọ, yabụ anyị nwere nhọrọ ole na ole n'akụkụ a ma a bịa n'inwe osisi anyị nwere ike iji maka usoro a.
Na -esote osisi, anyị ga -enwerịrị akwụkwọ. A na -enweta akwụkwọ a site na okpete, nke a na -ahụkarị n'akụkụ mgbochi mmiri (osimiri, ọdọ ma ọ bụ oke osimiri). Anyị nwere ike ịchọta ya na ala na aja. Anyị nwere ike wepu okpete shuga naanị site na ịhọrọ ya na ịpị. A na -achọkarị ahịhịa amị atọ iji nwee ike ịmepụta akwụkwọ atọ na mkpokọta.
Enwere ike idebe akwụkwọ ahụ n'ime igbe na igbe nrụpụta. N'ebe ahụ, ị ​​ga -etinyerịrị okpete sugar ndị a ka ị nweta akwụkwọ ahụ. Ahịhịa atọ na -eche na enwetara ọrụ atọ na usoro a. Agbanyeghị na -eji akwụkwọ enweta ụlọ ahịa akwụkwọ, ọ bụghị naanị akwụkwọ, yabụ anyị ka chọrọ akpụkpọ anụ ka anyị nwee ike nwee akwụkwọ ahụ. Ihe anyị ga -eme ugbu a bụ inweta ehi, nke anyị nwere ike iji mma agha ọ bụla gbuo.
Ka a na -ala ehi n'iyi, a na -etinye akpụkpọ anụ n'akwụkwọ anyị, nke anyị nwere ike iji wee mepụta akwụkwọ ahụ. Ntụziaka a na -ajụ ajụjụ na -arịọ anyị ka anyị debe akwụkwọ ahụ n'ahịrị ma debe akpụkpọ ahụ n'elu ma ọ bụ n'okpuru akwụkwọ ahụ. Nke a na -enye anyị ohere inweta akwụkwọ na ebe anyị chọrọ atọ, anyị na -emegharị usoro ahụ ka anyị wee nweta akwụkwọ atọ na njedebe nke usoro ahụ.
Gaa ụlọ akwụkwọ
Na mkpokọta, ị ga -achọ mbadamba isii nke ụdị osisi ụfọdụ site na ndị a kpọtụrụ aha na ngalaba gara aga yana akwụkwọ atọ, nke anyị gosiri gị otu anyị nwere ike isi rụpụta n'ime akaụntụ anyị n'ime egwuregwu. Ozugbo emere nke a, anyị dị njikere ugbu a imepụta ọba akwụkwọ nke anyị na egwuregwu. Ntụziaka dị ka ndị a, nke ị nwere ike ịhụ na foto dị n'elu:
Ogwe osisi kwụ ọtọ atọ dị n'elu.
Akwụkwọ atọ kwụ ọtọ na akụkụ etiti.
Ogwe osisi kwụ ọtọ atọ na ala.
Na usoro ndị a anyị emeela ọbá akwụkwọ nke anyị na Minecraft. Usoro nka nke ya abụghị ihe mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ihe na -ewe anyị ogologo oge bụ imepụta akwụkwọ ndị anyị ga -eji mechaa n'ọbá akwụkwọ a. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe zuru oke, anyị nwere ike ịme ọba akwụkwọ dị iche iche n'onwe anyị, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Agbanyeghị na ịnweta ihe ndị a bụ ihe nwere ike ịdị ọnụ.
Nweta ọba akwụkwọ
Minecraft na -enye anyị ohere ịme ọbá akwụkwọ nke anyị, ihe anyị hụburu. Agbanyeghị, dịka anyị kwurula, usoro ahụ n'onwe ya nwere ike ịdị ọnụ n'ihi na anyị ga -echere okpete shuga, gbuo ehi ma nwee nkụ zuru oke n'oge niile. Mana n'ezie ọ ga -ekwe omume ịnweta ọba akwụkwọ n'ime egwuregwu, ebe ọ bụ na -emepụta ihe eke na ebe abụọ na ụwa nke Minecraft. Ọ dị mma ịmatakwu banyere nke a, n'ihi na anyị nwere ike ịhụ ha n'ọkwa egwuregwu anyị.
N'ime obodo n'ime egwuregwu, n'ime ndị nwere ọbá akwụkwọ, ọba akwụkwọ asaa n'ime ụlọ a na -ekwu maka ya. Yabụ, ọ bụrụ na anyị gaa n'otu obodo nwere ọbá akwụkwọ, anyị ga -ahụ na enwere igbe akwụkwọ ndị a n'ime. Enyere anyị ohere ka anyị na ndị obodo n'ime obodo kwurịtara maka ụlọ ahịa akwụkwọ ma ọ bụ ọtụtụ. Ị ga -enwe ike ịzụ ahịa, ka ị nweta otu n'ụzọ bara uru karịa inwe iwu ya.
Ọzọkwa, Ọzọkwa na ebe e wusiri ike anyị na -ahụ ụlọ ahịa akwụkwọ. N'ime ebe e wusiri ike, ọ dịkarịa ala otu ọbá akwụkwọ na -enwekarị igbe akwụkwọ a haziri na ogidi na n'akụkụ mgbidi. N'ime ọbá akwụkwọ ọ bụla enwere ihe dị ka ụlọ ahịa akwụkwọ 224. Dika esi ekepụta ha na gburugburu ebe a, anyị nwere ike nweta ụfọdụ ma ọ bụrụ na mgbe anyị nọ ebe ahụ anyị hụrụ na ọ nwere nke anyị nwere ike were.
Ka anyị na -aga n'ihu n'egwuregwu ahụ anyị na -eleta obodo ma ọ bụ ebe e wusiri ike, mgbe ahụ anyị nwere ike ịhụ ụlọ ahịa akwụkwọ a ka anyị na -aga. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ike imepụta ha n'onwe anyị, yana oge na akụrụngwa nke a gụnyere, mana enwere ike nweta ya na ebe ndị a, n'ihi na ebe ndị ahụ ka a na -emepụta ha na akpaghị aka. Yabụ na anyị nwere ike họrọ ụzọ kachasị ọsọ wee nweta ọba akwụkwọ ndị ahụ n'ụzọ dị mfe karịa ịnwe nka.
Enwere ụfọdụ ihe gbasara ọba akwụkwọ dị na Minecraft nke ekwesịrị ịmara, ka anyị wee dịrị njikere oge niile ka anyị na ha rụọ ọrụ. Otu akụkụ dị mkpa bụ na ọ bụrụ ọkụ ma ọ bụ mgbawa, enwere ike ibibi shelves ndị a ngwa ngwa, yabụ ọ dị mkpa ịkpachara anya. Ọ bụrụ na nke a emee, anyị nwere mmasị ịgbanwe ọnọdụ gị ka ihe ọ bụla ghara ime. Ihe niile furu anyị iji wuo ha ga -emebi, yabụ na anyị ga -eme ihe ngwa ngwa.
Dịka anyị kwuru na mbụ, ọba akwụkwọ na-enyere anyị aka n'ịgba afa ime egwuregwu. Nke a bụ ihe enwere ike ịhụ nke ọma ma ọ bụrụ na anyị edobe tebụl enchantment n'akụkụ ọbá akwụkwọ dị na Minecraft. Ọ bụrụ na anyị emee nke a, anyị ga -ahụ na usoro irighiri ihe ga -apụta nke ahụ ha na -esi n'akwụkwọ ndị ahụ pụta na ha ga -erutekwa na tebụl nke enchantment anyị ka enwetara. Nke a bụ ihe ga -enyere aka bulie enchant ndị ahụ, isi ihe mere ọtụtụ ndị ọrụ ji eji ọba akwụkwọ n'ime egwuregwu a.
Enwere ike idobe akwụkwọ akwụkwọ n'efu. Na mbido, egwuregwu ahụ enyeghị ohere a, mana emesia agbakwunyere nhọrọ nke inwe ike idobe ọbá akwụkwọ ebe anyị chọrọ. Yabụ ị nwere ike jiri ọnọdụ ahụ n'ime egwuregwu gwuo egwu masịrị gị. Dịka anyị kwurula, ọ ka mma ị nọ ha n'ebe dị anya site n'ihe nwere ike ịkpata ọkụ ma ọ bụ mgbawa, ka ihe ọ bụla ghara ime ha.
Site na data ndị a, ị marala ihe niile gbasara ọba akwụkwọ dị na egwuregwu a. Ugbu a ị nwere ike mebe ọbá akwụkwọ nke gị na Minecraft, yana chọpụta ebe ụwa niile nke egwuregwu a siri pụta, nke nwere ike ịbụ ụzọ na -azọpụta gị na usoro a nke iji aka gị rụọ ya. Obi abụọ adịghị ya, ha bụ ezigbo enyemaka ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwalite tebụl anwansi anyị, yabụ ọ dị mma ịnwe ụfọdụ n'ime egwuregwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Etu esi eme ọba akwụkwọ na Minecraft
Etu ị ga -esi weghachite akaụntụ Dokkan Battle